MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardDecember 2015 - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Author MPT TelecommunicationPosted on December 24, 2015 September 23, 2016 Categories Latest News, Press Releases
MPT Vanity Number Auction held for Charity Donation
[:en](Yangon, Myanmar, December 21, 2015) – MPT, Myanmar’s first and leading telecommunications company, held Vanity Numbers Auctions at Park Royal Hotel on December 19, 2015 from 9:00am to 6:00pm. MPT organized this CSR Auction to raise funds foradonation of Solar Lanterns to Phaung Daw Oo Monastic Education.
There were 164 bidders attended the auction and they were excited and enjoyed for their bidding because they would be not only the winning bidders of the MPT vanity numbers but also the donors of the Panasonic Solar Lanterns to the Monastic Education Centers in Myanmar.
During the auction, 126 numbers which included 56 numbers and 14 packages were auctioned in whole session. These numbers were highly coveted7repeaters number types,6repeaters number types and package of5repeaters.
The bidder paid the highest price for7repeater number as Ks.22 Million , the highest price for6repeater number as Ks.9.4 Million and the highest price for the package as Ks.7.5 Million. MPT got about Ks.292.8 Million according to the acknowledgements of the winning bidders on the auction day. All the winning bidders receivedabank challan on the auction day to settle the payment at Myanma Economic Bank (MEB) not later than December 28, 2015.
Then, they collect the vanity number SIM at MPT Office with the proof of MEB Payment Slip and NRC Card. MPT gave the appreciation certificates to all these winning bidders for joining the auction and being the winning bidders on the auction day. MPT will release the detail announcement of the revenue to the public next year after payment settlement.
All these revenue will be used for Panasonic Solar Storages donation at Monastic Education Centers though Phaung Daw Oo Monastic Education in Mandalay.[:my]ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ၄င်းတို့၏ GSM/WCDMA နံပါတ်အလှများလေလံတင်ရောင်းချပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့Park Royal ဟိုတယ်၌ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအချိန်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤလေလံပွဲမှရသော ရောင်းရငွေအားလုံးကို မည်သည့်အမြတ်အစွန်းမျှမယူဘဲ ဖောင်တော်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းသို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်မီးအိမ်များ လှူဒါန်းရန်အတွက် သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
လေလံပွဲသို့ ပါဝင်သူပေါင်း ၁၆၄ ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နံပါတ်အလှများဝယ်ယူနိုင်ခြင်း အတွက်သာမက မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများသို့လည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်မီးအိမ်များ လှူဒါန်းမှုအတွက်လည်း ပါဝင်လှူဒါန်းခွင့်ရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
လေလံပွဲအတွင်း နံပါတ်ပေါင်း ၁၂၆ ခုကိုလေလံတင်ခဲ့ပြီး တစ်ခုချင်းနံပါတ် ၅၆ ခုနှင့် နံပါတ်တွဲ ၁၄ တွဲပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုနံပါတ်များတွင် နံပါတ် ၇ လုံးတူများ၊ ၆ လုံးတူများနှင့် ၅ လုံးတူ နံပါတ်တွဲများပါဝင်သည်။
နံပါတ် ၇ လုံးတူ တစ်ခုကို သိန်း ၂၂၀ ဖြင့်အမြင့်ဆုံးလေလံအောင်ခဲ့ပြီး၊ နံပါတ် ၆ လုံးတူထဲတွင် အမြင့်ဆုံး ၉၄ သိန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ နံပါတ်တွဲများထဲတွင် အမြင့်ဆုံး ၇၅ သိန်းဖြင့်လည်းကောင်း လေလံအောင်မြင်ခဲ့သည်။ လေလံပွဲချိန်အတွင်း စုစုပေါင်း ငွေကျပ် ၂၉၂.၈ သန်းဖိုး လေလံအောင်မြင်ခဲ့သည်။ လေလံအောင်မြင်သူ အားလုံးသည် လေလံပွဲနေ့တွင် ဘဏ်ချလန်တစ်ခုရရှိခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နောက်ဆုံးထားပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MEB) တွင် ငွေပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ဘဏ်မှငွေသွင်းပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် Payment Slip နှင့် မှတ်ပုံတင်ကိုပြသကာ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ MPT ရုံးချုပ်တွင် လေလံအောင်ထားသော နံပါတ်အလှများကို ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လေလံပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ အားလုံးနှင့် လေလံအောင်မြင်ခဲ့သူများအား MPT မှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များ ပြန်လည်ချီးမြှင့် ပေးခဲ့ပါသည်။ ငွေပေးချေမှုများ အပြီးသတ်ပြီးစီးသွားသောအခါတွင် MPT မှ အမှန်တကယ်ရရှိငွေများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် အများပြည်သူများသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
လေလံတင်ရောင်းချခြင်းမှ ရရှိသောရောင်းရငွေအားလုံးဖြင့် MPT အမှတ်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထားသော Panasonic အမျိုးအစား နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးအိမ်များနှင့် အားသွင်းပစ္စည်းများဝယ်ယူကာ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသောဒေသများမှ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းများသို့ မန္တလေးဖောင်တော်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းမှ တစ်ဆင့် လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on December 22, 2015 September 23, 2016 Categories CSR Activities, Latest News, Press Releases
MPT launches value added services to expand the offers for the mobile users
[:en]Yangon, Myanmar, December 18, 2015 – Myanma Posts and Telecommunications (MPT), the first and leading telecommunications operator in Myanmar, announced today that they are launching value added services for their customers, in another move to improve and expand their offering. Starting from December 20th 2015, all MPT GSM and WCDMA users can start using these new services.
To have access to these services,auser can send an SMS by typing service code to pick their choice of services and short code number to respective vendor. The subscription fees are set affordable to attract users.
“People use their mobiles for everything. Calls, texts, emails, taking pictures, they set their morning alarm, take notes, keep their calendar, play games. So MPT would like to expand on the services we can provide to our customers, give them more fun options, like dream interpretation, and even more useful options, like first aid tips, and health tips. They are all easy to use and affordable,” said Mr.Koichi Kawase, Chief Commercial Officer of MPT-KSGM Joint Operation.
To provide the services, MPT has appointed three local companies; Golden TMH Telecom Company Limited, Contents Hub Co., Ltd. and King Royal Technologies Company Limited. We will expand the services continuously for our customers to provide more attractive contents.
CompanySMS NumberWebsiteLaunch Date
Career Tips – delivers career advice (how to keep current job or findanew one)
Budget Tips – delivers budget friendly tips on how to manage and save money on your daily expenses
First Aid Tips – delivers simple first aid advice on how to treatarange of injuries and illnesses
Health Tips – delivers simple advice on how to stay healthy
Fitness Tips – delivers tips that will help you start an exercise routine that you’ll actually enjoy and stick to
Love Facts – delivers love and dating tips on how to maintainagood and healthy relationship
Dream Interpretation – delivers interpretation on your dreams at night
Travel Quiz – Relating travel & tourism questions. Winner can get travel package and something special.
Horoscope (Sayar Zin Yaw Ni) – Horoscope service for the people who love to know their Fortune.
Horoscope (Saw Yu Nwe) – Horoscope service for the people who love to know their Fortune
Life Style – Designed for people who are concerned with lifestyle guides
Celebrity – Subscribers will get Local Celebrity’s activities, celebrity’s gossips, events, concerts and news asavideo content.
Agriculture – Myanmar Agriculture information for country citizens
Sport – Football (Local & International)
ZAPP – ZAPP is an application that in-house all contents offered by Zed, including promotions for customers to enjoy many exciting prizes/freebies
BUSINESS INFO – Business related services (Tips, Business opportunity, Career, Property, Cars & etc)
JOKES – Various jokes related to Myanmar culture or even other generic jokes.
QUOTE – Compilation of quotes & saying in Myanmar language, covering religious, love, relationship & famous quotes.
MyFree – This isafree service where you can download exciting mobile contents free of charge, e.g. wallpapers, screensavers, truetone
NEWS – GENERAL – Myanmar general news, covering local & home news, e.g. politics, religion, technology, international relations, tourism etc.
NEWS –ENTERTAINMENT – Covering local & international entertainment news, e.g.: gossips, artists updates, latest music/movies, concerts etc.
NEWS – SPORTS – Sports News, including but not limited to football news both from Local & International football clubs
Click here for Detail VAS Additional Information of Vendors Eng[:my]ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က သုံးစွဲသူများအတွက် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများ (Value Added Services)ကို ထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှ စ၍ MPT ၏ GSM နှင့် WCDMA သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် MPT နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများမှ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို ရယူနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူလိုပါက မိမိနှစ်သက်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုရည်ညွှန်းထားသော service code ကိုရိုက်နှိပ်ကာ သက်ဆိုင်ရင် ၀န်ဆောင်မှုပေးသောကုမ္ပဏီသို့ short code အသုံးပြုကာ စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။ App တစ်ခုချင်းစီကို စတင်သုံးစွဲရန်အတွက် ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားမှာလည်း မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများကြိုက်နှစ်သက်သော ဈေးနှုန်းသာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
“ခုခေတ်မှာလူတွေက မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုထဲကို အမျိုးစုံအသုံးပြုနေကြပါတယ်၊ ဖုန်းခေါ်တယ်၊ စာပို့တယ်၊ အီးမေးလ် သုံးတယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်၊ နှိုးစက်နာရီသုံးတယ်၊ မှတ်စုတွေရေးတယ်၊ အချိန်းအချက်တွေ ရက်တွေ မှတ်ကြတယ်၊ ဂိမ်းတွေဆော့ကြတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေ ပိုပြီး သုံးလို့ရမဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုအသစ်တွေကို ထပ်ပေးချင်ပါတယ်၊ ဥပမာ- အိပ်မက်ကျမ်းလိုဟာမျိုးတို့၊ အသုံးအရမ်းတည့်တဲ့ အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေမျိုးတွေလည်း ပေးထားပါတယ်၊” ဟု MPT-KSGM Joint Operation မှ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr.Koichi Kawase က ပြောသည်။
ဤထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်အတွက် MPT သည် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ ၃ ခုနှင့် ရွေးချယ်ထားပြီး အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှာ Golden TMH Telecom Company Limited၊ Contents Hub Co., Ltd. နှင့် King Royal Technologies Company Limited တို့ ဖြစ်ကြသည်။ MPT မှ အဆိုပါထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို MPT ၏ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူများအတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ရာ ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို ဆက်လက်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုသူများ သက်ဆိုင်ရာ website များသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ (လက်ရှိအလုပ်တွင် တည်မြဲရေး သို့မဟုတ် အသစ်ရှာဖွေရေး)
ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ နေ့စဉ်ဝင်ငွေအပေါ်တွင် မည်သို့ခန့်ခွဲမည် မည်သို့စုဆောင်းမည် စသည့်လွယ်ကူသည့် နည်းလမ်းများ
ရှေးဦးသူနာပြုနည်းလမ်းများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာအမျိုးမျိုးနှင့် ဖျားနာမှုများအတွက် မည်သို့ပြုစုလုပ်ကိုင်ရမည်ဆိုသည့် လွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းများ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ ကျန်းမာစေရန်မည်သို့ နေထိုင်ရမည်ဆိုသည့် အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများ
ကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ
ချစ်မှုရေးရာကဏ္ဍ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားအဆင်ပြေစေရန် မည်သို့ပြုမူလုပ်ဆောင်ရမည်စသည့် ချစ်မှုရေးရာအကြံဉာဏ်များ
အိပ်မက်ကျမ်း အိပ်မက်များကို အဓိပ္ပါယ်ပြန်ပေးနိုင်သည့် အိပ်မက်ကျမ်း
ခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရင်းခရီးသွားဆု လက်မှတ်များ ရရှိနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဇင်ယော်နီ၏ဂဏန်းဗေဒင်နေ့စဉ်ဟောစာတမ်း မိမိကံကြမ္မာကိုသိရှိလိုသောသူများအတွက် ဆရာဇင်ယော်နီ၏ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာစောယုနွယ်၏ရာသီခွင် ဟောစာတမ်း မိမိကံကြမ္မာကိုသိရှိလိုသောသူများအတွက်ဆရာမဒေါက်တာဒေါ်စောယုနွယ်၏ဗေဒင်ဟောစာတမ်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဘဝနေထိုင်မှုအတွက်အကောင်း ဆုံး နည်းလမ်းများ လူနေမှုဆိုင်ရာအသိပေးလမ်းညွှန်မှုများကိုကြိုက် နှစ်သက်သူများအ တွက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အနုပညာကြယ်ပွင့်များ နှင့် စူပါ မော်ဒယ်လ်များ၏ လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုဗွီဒီယိုများ အနုပညာကြယ်ပွင့်များ၏လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုနောက်ဆုံးရသတင်းများအားဗွီဒီယို ဖိုင်များဖြင့်ရရှိနိုင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။
တောင်သူများလက်စွဲမိုဘိုင်းသတင်းဝန်ဆောင်မှု တောင်သူဦးကြီးများအားစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအားသိရှိနိုင်စေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သက်ဝင်လှုပ်ရှားအားကစား ဝန်ဆောင်မှု ပြည်တွင်း၊ပြည်ပမှအားကစားသတင်းများအားဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Zed မှ ပြုလုပ်ထားသည့် application များအားလုံးကို ရယူနိုင်မည့် app၊ အခမဲ့ရယူနိုင်သည့်အရာများ ဆုကြေးများစွာကိုလည်း ရယူနိုင်သည်
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ (နည်းလမ်းများ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုသတင်းများ၊ အိမ်ခြံမြေသတင်းများ၊ ကား)
ဟာသ မြန်မာနှင့်သက်ဆိုင်သော ဟာသများ အခြားနယ်ပယ်များမှ ဟာသများ
အဆိုအမိန့်များ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အချစ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ကျော်ကြားသော အဆိုအမိန့်များနှင့် စကားပုံများ
MyFree ရှိနေပြီးသား မိုဘိုင်းအချက်အလက်များကို အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်မည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊ ဥပမာ- နောက်ခံပုံများ၊ ဖုန်းမြည်သံသီချင်းများ
သတင်း (အထွေထွေ) မြန်မာနိုင်ငံရေးရာသတင်းများ၊ ပြည်တွင်းသတင်းများ၊ ဥပမာ- နိုင်ငံရေး၊ ပြည်တွင်းရေးရာ၊ နည်းပညာ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ခရီးသွား
သတင်း (ဖျော်ဖြေရေး) ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖျော်ဖြေရေးသတင်းများ၊ ဥပမာ- အတွင်းရေးသတင်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၏ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ နောက်ဆုံးထွက်သီချင်းများ ရုပ်ရှင်များ၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ
သတင်း (အားကစား) ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးအသင်းများမှ သတင်းများအပါအဝင် အားကစားသတင်းများ
ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို အသေးစိတ်သိရှိရန် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on December 21, 2015 September 23, 2016 Categories Latest News, Press Releases
MPT CONTINUES RENOVATING LANDMARK CLOCK TOWER AT SITTWE
[:en](Yangon, December 15, 2015) MPT, Myanmar’s first and leading telecommunications company, has donated 310 Lakh to renovate the ancient and beautiful clock tower at Sittwe, which was built in 1887 asabirthday present to the British Queen Victoria. These renovations mean that the clock, which is an important landmark for the Rakhine people, will chime again for the first time in 20 years. The clock is being unveiled with an opening ceremony today, Arakan State Day.
The clock has been renovated structurally and mechanically as well as musically, and will now playatraditional Rakhine melody. This activity is part of MPT’s ongoing commitment to ‘Moving Myanmar Forward,’ with MPT’s CSR program also including the recent candle, shawl and financial donations for religious festivals throughout the month of November, and the forthcoming Vanity Number Auction, from which all proceeds will be going towards helping provide electricity to Myanmar people living in rural areas. The auction will be held in Yangon on December 19th.
Mr. Yoshiaki Benino, Chief Operating Officer of MPT-KSGM Joint Operation, said “MPT is committed to improving the lives of the Myanmar people, by helping promote development, and also by preserving landmarks that are important culturally to Myanmar. This clock tower has stood for 128 years, and we hope that asaresult of these renovations, it stands for another 128!”[:my]ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်သော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) က ၁၈၈၇ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှဘုရင်မ ဗစ်တိုးရီးယား၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် စစ်တွေမြို့ရှိ မြို့ဂုဏ်ဆောင် နာရီစင်ကြီးအား သိန်း ၃၁၀ အကုန်အကျခံ၍ ပြင်ဆင်ရန်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဤပြုပြင်မှုသည် ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် စစ်တွေမြို့၏ အရေးကြီးသောအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည့် နာရီစင်ကြီးကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း ပြန်လည်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ရခိုင်အမျိုးသားနေ့တွင် နာရီစင်ကြီး ပြင်ဆင်မှုအား အခမ်းအနားဖြင့် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သည်။
နာရီစင်ကြီးအား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်း နှင့် ကိုယ်ထည်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ခြင်းအပြင် နာရီစင်အသံပိုင်းစနစ်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်လည်း ရခိုင်ရိုးရာတေးသံများလည်း ထည့်သွင်းထားရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြင်ဆင်ခြင်းအား လှူဒါန်းမှုသည်၊ နိုဝင်ဘာလ ရိုးရာပွဲတော်များအတွင်း ဆီမီးများ ဘုရားပူဇော်သည့်သဘက်များနှင့် ငွေလှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် နံပါတ်အလှများ လေလံတင်ရောင်းချငွေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများရှိ မီးမရရှိသောနေရာများသို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မီးအိမ်များလှူဒါန်းခြင်းစသည့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများသို့ MPT ၏ “ရှေ့သို့လှမ်းချီမြန်မာပြည်” ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ပရဟိတလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လှူဒါန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operation ၏ Chief Operating Officer ဖြစ်သူ Mr. Yoshiaki Benino က “မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ဘဝတွေတိုးတက်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရင်း မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် ရိုးရာဓလေ့အရ အရေးကြီးတဲ့ အထိမ်းအမှတ်တွေကိုလည်း ထိန်းသိမ်းမှုတွေ MPTက လုပ်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်၊ ဒီနာရီစင်ကြီးက ဒီဒေသမှာ ရှိနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၁၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ခုလိုပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့် နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၁၂၈ နှစ်ထက်မက ရပ်တည်နေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on December 15, 2015 September 23, 2016 Categories CSR Activities, Latest News, Press Releases
MPT is selling Vanity numbers to bring electricity to remote Myanmar
[:en](Yangon, Myanmar, December 07, 2015) – MPT, Myanmar’s first and leading telecommunications company, will be hosting an auction of its Vanity numbers of MPT Mobiles at Park Royal Hotel in Yangon from 9:00 am to 6:00 pm on December 19th 2015. All the revenue generated from the auction will be used to provide Solar Lanterns allowing villagers to have some light to read / study in the evening, recharge their phone anytime.
This is the time that the Myanmar people will have access to these coveted Vanity numbers directly from MPT. All the proceeds from this CSR auction will enable MPT to provide Phaungdawoo Monastic Education in Mandalay and its communities where electricity is not available with Panasonic solar storage.
There will be one auction in the morning, from 9am-1pm, and another in the afternoon, from 2pm-6pm. MPT will invite individual or corporate guests and individual or corporate entities can send an email to [email protected] or call 01-563130 including their Name, Address, Phone Number,acopy of NRC card, Company Name, Bank detail and they will receiveaConfirmation Email with an Invitation upon availability.
70 numbers of auctions will be auctioned in whole session, including highly coveted7repeaters and6repeater number types, and packages of5repeaters.
This innovative initiative is part of MPT’s long term commitment to help improve the lifestyle of the Myanmar people and the economically disadvantaged by offering light and energy to those who would otherwise not have access. This is in addition to MPT’s many other CSR commitments, including the SMS donation for flood victims, sponsorship of various development programs, and candle and shawl donations to many religious festivals throughout the year.
Mr.Yoshiaki Benino, Chief Operation Officer of MPT-KSGM Joint Operation, said “We are very happy that we are able to sell these Vanity numbers foracharitable cause. It is one of MPT’s top priorities to aid the development and growth of Myanmar, and by providing light, energy, and communication facilities to the people in rural areas, we hope that this makesapositive difference to the people and their communities.”
The Panasonic solar Storage can create, store and utilize solar energy effectively. Each solar Storage can function up to 24 hours onasingle five-hour charge. It can last up to five years. Battery is replaceable, hence reducing operations cost as well as the need for maintenance. The Solar Storage doubles up asalight and power source at night, with the added capability to charge small mobile devices such as mobile phones viaaUSB port, allowing these isolated local communities to stay connected.
For more information about terms and conditions of Vanity Number Auction, please visit to https://www.mpt.com.mm/en/wp-content/uploads/2015/12/Vanity-Number-Auction-Terms-and-Conditions_-Final_-7Dec.pdf
Click here for vanity numbers
Click here for vanity numbers presentation[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on December 7, 2015 September 23, 2016 Categories CSR Activities, Latest News, Press Releases
Buy OPPO Neo7and enjoy 777MB for6months
[:en]When customers buy any new OPPO Neo7handsets during the promotion period, they will be givenafree MPT sim card with free 777MB per month, if they top up at least Ks.1,000 per month (including first month). This free 777MB of data will only be given once per month, up to6months from activation.
Promotion will be valid till further notice.[:my]OPPO Neo7Handset အသစ်ကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းတွင် ၀ယ်ယူအသုံးပြုသူများအားလုံးသည် တစ်လလျှင် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် ၇၇၇ မီဂါဗိုက်ပါရှိသော MPT ဆင်းမ်ကတ်တစ်ခုကို အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ၇၇၇မီဂါဗိုက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် တစ်လလျှင် အနည်းဆုံး ၁၀၀၀ကျပ်ငွေဖြည့်သွင်းပေးရမည်ဖြစ်ပါသည် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ဖုန်းစတင်အသုံးပြုသည့်အချိန်မှစတင်၍ ၆လစာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကာလကို နောက်ထပ်ကြေငြာချက်ထပ်မံ မထုတ်ခင်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။[:]
Author MPT TelecommunicationPosted on December 7, 2015 Categories Latest News